Belgium oo ugu dambeyn ka taqalustay Japan +SAWIRRO+VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Belgium oo ugu dambeyn ka taqalustay Japan +SAWIRRO+VIDEO
Xulka qaranka Belgium ayaa guul soo laabasho layaableh ka gaadhay Japan oo laba gool kaga hormartay wuxuuna Belgium balan cad ka samaystay xulka qaranka Brazil oo guul ka sii gaadhay Mexico. Inkasta oo Japan uu laba gool kaga yaabsaday Belgium haddana Roberto Martinez ayaa sameeyay laba isbadal oo si aan la rumaysan karin kulankan u go’aamiyay.
Japan waxaa labada gool ee ay ku damaashaadeen u saxiixay G. Haraguchi (48) iyo T. Inui (52) laakiin waxaa farxadii Japan murugo iyo qalbi jab u badalay xidigaha kala ah J. Vertonghen (69) M. Fellaini (74) iyo N. Chadli (90+4) oo min hal gool dhaliyay.
Kaydka: Masaaki Higashiguchi, Kosuke Nakamura, Ryota Oshima, Takashi Usami, Gotoku Sakai, Keisuke Honda, Wataru Endo, Naomichi Ueda, Yoshinori Muto, Tomoaki Makino, Hotaru Yamaguchi, Shinji Okazaki.
Kaydka: Koen Casteels, Simon Mignolet, Mousa Dembele, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen, Adnan Januzaj, Nacer Chadli, Dedryck Borata, Maroaune Fellaini, Michy Batshuayi, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard.
Xulka qaranka Belgium ayaa kulankan iskeenay isaga oo ah kan ugu cad cad ee guusha loo saadaalinayay laakiin mishiinada Japan ayaa wacdaro la soo baxay waxayna xaalad adag ku abuureen Belgium oo qaybtii hore weerarkooda dhamacda ahi uu dhaafi kari waayay difaaca Japan oo shaqo wayn qabtay.
Wax walba oo uu xulka qaranka Belgium sameeyay qaybtii hore ee kulankan waxay ku fashilmeen in ay wax goolal ah dhaliyaan taas oo Japan u ahayd fursad wayn oo ay ku tijaabiyeen Belgium oo ay cabsi wayn ka qabeen.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah taas oo keentay in tababare kastaaba uu waqtigii nasashada ka soo fikiray qorshaha uu ciyaarta waxa kaga badali karo iyaga oo waliba dar daarankii ugu danbeeyay soo siiyay ciyaartoydooda.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta mishiinada Japan waxay u muuqdeen kuwo laga soo badalay baytariyadii difaaca ahaa isla markaana loo soo galiyay kuwo weerar ah isla markaana ay wali ku dheehan tahay difaacasho aan fursad siinayn Belgium.
DAQIIQADII 48 AAD Xulka qaranka Japan ayaa helay goolkooda furitaanka ee wadnaha taabtay Belgium waxaana goolkan u saxiixay Genki Haraguchi kaas oo caawin ka helay Gaku Shibasaki waxayan Japan ciyaarta ka dhigtay 1-0 ay ugaga naxsadeen Belgium oo weerarkoodii halista ahaa uu shaqo gabay.
DAQIIQADII 52 AAD Xulka qaranka Japan ayaa qof kasta ka yaabsaday kadib markii ay la yimaadeen goolka labaad isla markaana ay xaalad xun dhigeen rajadii Belgium ee koobka aduunka waxaana Japan goolka labaad u saxiixay xidigaha wacdaraha soo dhigayay ee Takashi Unui kaas oo markiisa caawin ka helay Shinji Kagawa waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay Japan si layaableh hogaanka ugu dheeraysatay.
Tababaraha ree Spain ee xulka qaranka Belgium Roberto Martinez ayaa u adkaysan waayay dhax yaalaha ku dayay xulkiisa wuxuuna kaydka ka soo kiciyay Maroaune Fellaini oo uu ku badalay Dries Mertens oo kulankan saamayn ku yeelan waayay wuxuuna sidoo kale keenay Nacer Chadli isaga oo badalay Yannick Carrasco.
DAQIIQADII 69 AAD Rajadii xulka Belgium ayaa woxogaa soo noolaatay kadib markii uu difaaca Jan Vertonghen awooday in uu gool madax qurux badan xulkiisa kaga dulqaaday murugada iyo calool xumada haysatay wuxuuna goolkan ku dhaliyay kubbad koorne laga soo tuuray oo difaaca Japan iska saari kari waayay waxayna ciyaartu noqotay 2-1 uu wali Japan hogaanka ciyaarta ku hayo.
DAQIIQADII 74 AAD Alla maxay xamaasad ahayd! Xulka qaranka Belgium ee u muuqday kuwo ay qaarka danbe naftu ka soo baxday ayaa markan helay goolka ay si buuxda rajadoodii koobka aduunka ugu soo celiyeen kadib markii uu xidiga kayda ka soo baxay ee Maroaune Fellaini uu kawada dheeraaday difaaca Japan isla markaana uu caawin ka helay Eden Hazard iyada oo Felliani uu dhaliyay goolka kaydka looga soo kiciyay waxayna ciyaartu noqotay barbaro 2-2 ah.
Xamaasada ciyaarta ayaa gaadhay heer waali ah waxayna markan Belgium dib u aamineen naftooda si ay u raadiyaan goolka saddexaad oo ay iskugu dayaan in ay gabi ahaanba dhinaca kale u dhigaan natiijadii ciyaarta ee 2-0 ka looga hayay.
DAQIIQADII 85 AAD Laba gool badbaadineed oo xidhiidh ah isla markaana cajiib ah ayuu goolhayaha Japan ee Kawashima uu Belgium kaga joojiyay fursad ay goolka saddexaad ee guusha ku gaadhi kareen wuxuuna markii hore Kawashima uu Meunier ka beeniyay gool uu madax ku dhalin lahaa laakiin waqti yar kadib waxa uu markale Lukaku ka joojiyay in uu goolkan dhaliyo.
DAQIIQADII 87 AAD Goolhayaha Japan ee Kawashima ayaa markale ku guntaday in xulkiisa gool laga dhaliyo waqti xaasaasi ah wuuxuna markan fursad ka beeniyay Vertonghen iyada oo Belgium uu markan awooda weerar ku cadaadinayay Japan.
Intii lagu jiray afar daqiiqo oo dheeri ahaa oo ciyaarta lagu daray Japan ayaa heshay fursado ay indhaha caalamka ku xadi kartay laakiin goolhaye Courtois ayaa markiisa shaqo fiican qabtay si uu Belgium ciyaarta ugu sii hayo.
DAQIIQADII 90+4 aad Xulka qaranka Belgium ayaa noqday xulka indhaha caalamka ku xaday goolka guusha ee waqtiga qalbi jabka ah ay Japan dhulka ku dhigeen waxaana geesiga Belgium noqday Nacer Chadli oo isna ciyaarta badal ku soo galay wuxuuna goolkan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay Thomas Meunier.
Ciyaarta ayaa noqotay 3-2 ay uu xulka qaranka Belgium si laayableh ugu guulaystay kulan 2-0 hogaanka looga hayay waxaana saamayn cajiib ah yeeshay labadii badal ee uu Roberto Martinez xaalada dhinaca kale ugu dhigay waxayna Belgium si taariikhdu xusi doonto ugu soo baxeen siddeed dhamaadka koobka aduunka iyada oo Japan qaab xun oo qalbi hab ah Russia kaga bixi doonto.